၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်တွင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြစ်ကြီးနားမြို့ဒေသခံ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နေစဉ်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ထဲမှာ လိုက်လံ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ အင်တာနက်ဆိုင် လေးဆိုင်က ပိတ်ထားကြောင်း၊ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ မိမိတို့ သတင်းထောက်မှန်းသိတဲ့အခါ အသုံးပြုခွင့် မပေးကြောင်း သတင်းထောက်တစ်ဦးက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တွေအပါအ၀င် ပြည်တွင်း ပြည်ပသတင်းဌာနက သတင်းထောက် ၄၀ နီးပါးလောက် လိုက်ပါ သတင်းယူနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မနေ့ညက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြစ်ကြီးနားကို ရောက်လာကြတဲ့ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ ညစာစားပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗန်းမော်မြို့မှာ လူထုနဲ့တွေ့ဆုံ ဟောပြောမှာဖြစ်ပြီး ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဘက်ကို သွားရောက်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Still in the darkness? Open eyes! We are rational beings, we want to communicate each other, we need happiness, emotion, love, and we do not want to lonely anymore.
Feb 24, 2012 08:35 AM